RPMT1003MO-TT-DH122 ကြိတ်ခွဲ / လှည့်ရန်အတွက် Carbide Metal Insert
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်တောင်အမေရိက၊ အာဖရိက၊ အာရှစသည့်စကားလုံးများတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ရည်မှန်းချက်အဖြစ်“ ပထမတန်းစားထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးရန်” နှင့်ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ရန်၊ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်နှင့်အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကုမ္ပဏီများသည်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံးယုံကြည်ကြသည် - အရည်အသွေးသည်ယနေ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်အနာဂတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များရရှိရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုအောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ရန်ဤစကားလုံးတစ်လုံးလုံးမှဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ထာဝရပြီးပြည့်စုံပါစေ
စူပါမာကျောပြီးချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ 2. မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် CVD / PVD အပေါ်ယံပိုင်း;
3. ISO9001: ၂၀၀၈ တွင်အရည်အသွေးရှိသောစနစ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ၂၀၀% စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
4. Professional chip-breaker ဒီဇိုင်းသည်အကောင်းဆုံးသောဖြတ်တောက်နိုင်မှုကိုပေးသည်။
၅။ တိကျသောအတိုင်းအတာ၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊
TDC2 / 3/4 /5BP …
BPGO5B M05-M15 စိမ်းပြာရောင်မီးခိုးရောင်မှောင်မိုက် မြင့်မားသောအပူတောင့်တင်းခြင်းနှင့်ကောင်းသော resistanceto ပလပ်စတစ်ပုံပျက်မှုနှင့်အတူ။ မြန်သောမြန်နှုန်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အပြီးသတ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်အသင့်တော်သောသံမဏိသံမဏိ .quenched နှင့် carbon steel ။
BPG20B M10-M30P10-20 စိမ်းပြာရောင်မီးခိုးရောင်မှောင်မိုက် PVD ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော micro-grain carbide.Umm မှအလတ်စားနှင့်အနိမ့်အနိမ့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်သောသံမဏိအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်သောမျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့်မျက်နှာပြင်မြင့်မားခြင်း။
ရှေ့သို့ CNC သတ္တုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု APMT1135PDER-H2
နောက်တစ်ခု: HRC55 Solid Carbide Twist Drills (5D)